Himalaya Dainik » ४५ मिनेटसम्म सुटकेसभित्र बन्द नायिका हेली शाहले खोलिन रहस्य
४५ मिनेटसम्म सुटकेसभित्र बन्द नायिका हेली शाहले खोलिन रहस्य
यदि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेका विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ भने टिभी सिरियल इश्कमें मरजावां २ को सुटकेस सिन जरुर देख्नुभएको होला।
यो सिन भाइरल भएपछि यसले धेरै चर्चा पायो। सामाजिक सञ्जालमा यसको मजाक पनि बन्यो। भिडियो भाइरल भएपछि सिनकी नायिका हेली शाहसँग यसबारे कुराकानी गरिएको छ।
”म आफ्नो कामलाई सकेसम्म राम्रोसँग गर्न चाहन्छु। देखावटी, बनावटी नलागोस् भनेर धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्ने गर्छु
सुटकेस सिनका बारेमा हेली भन्छिन्,”म आफ्नो कामलाई सकेसम्म राम्रोसँग गर्न चाहन्छु। देखावटी, बनावटी नलागोस् भनेर धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्ने गर्छु। सुटकेस सिनपछि धेरैको प्रतिक्रिया पाएँ। मलाई थाहा छैन कसरी ? तर म पहिलो सुटकेसमा नै फिट भएँ। जुन सेटमा ल्याइएको थियो।
म त्यस सुटकेसमा ४५ मिनेटसम्म खुम्चिएर, बाङ्गिएर बसेँ। त्यहाँबाट निस्किएको धेरै दिनसम्म मेरो गर्दन बेस्सरी दुखिरह्यो”
मैले एकदमै गह्रौं लेहेङ्गा लगाएकी थिएँ तैपनि म सुटकेसमा अटाएँ तर यसको मतलब यो होइन कि, त्यो सबै काम सजिलो थियो। म त्यस सुटकेसमा ४५ मिनेटसम्म खुम्चिएर, बाङ्गिएर बसेँ। त्यहाँबाट निस्किएको धेरै दिनसम्म मेरो गर्दन बेस्सरी दुखिरह्यो।” हल्का टिप्पणी गरिरहनु भएकाले सायद मेरो यो मेहनतलाई सम्मान गर्नुहुन्छ होला ।
उक्त सिनमा नायिका हेली शाह आफ्नो कोठाबाट निस्केर आउँछिन् र चिप्लिएर भित्तामा ठोक्किन पुग्छिन्। अनि बेहोस भएर एउटा सुटकेसमा खस्न पुग्छिन्। त्यसपछि कसैले उनलाई सुटकेससहित उठाएर पानीमा फालिदिन्छ। अहिले उनकाे याे समाचार सामाजिक संजालमा भाइरल बनेकाे छ ।
जवानीमा हाई हाई रहेका यी चर्चित कलाकारको मर्ने बेलामा कोही न कोही !
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक र प्रेस सल्लाहकार रिमाल र थापालाई कोरोना ‘संक्रमण’
नेपालमा २२ घण्टा ब्याट्री टिक्ने, कहिलै ह्याङ् नहुने ल्यापटप सार्वजनिक, कति पर्छ मूल्य ?
कोराेना सङ्क्रमित ट्रम्प धेरै बिरामी परे भने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी को सम्म पुग्छ ?
कुकुर छोड्न नमानेपछि विवाह रोकियो
कोरोना संक्रमित ट्रम्प खतरामा, कारण यस्ताे छ
पोखरा सेती खाेँचबाट उद्धारपछि मृत्यु भएका युवककाे पहिचान खुलेन
हरेक नेपालीलाई एक रुपयामा होण्डा मोटरसाइकल !
रौतहटमा उखुबारीमा बालिका ‘मृत’ फेला
कोरोना भाइरस- विश्वभर एकै दिन कती पुगे संक्रमित ?
१८ दिनपछि खुल्यो बेनी-जोमसोम सडक !